အသေးစိတ်အချက်အလက်များ Meiigoo S8 ဗွီဒီယိုသုံးသပ်ချက် | Androidsis
Samsung Galaxy S8 Plus ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်ပွားဖြစ်သော Meiigoo S8 ၏ဗွီဒီယိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်
Francisco Ruiz | | မိုဘိုင်း, reviews
ကျွန်ုပ်အတွက်သံသယဖြစ်စရာမလိုသည့် Meiigoo S8 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤတွင်အတူရှိနေသည် Samsung Galaxy S8 Plus ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်ပွားဆယ်ရက်ထက်ပိုပြီးသုံးပြီးသုံးရက်အကြာမှာဒီ Android Nougat ကကောင်းတဲ့အရာအားလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ရဲ့အထင်အမြင်ကိုပြောပြပါ ဦး မယ်။
ငါသည်သင်တို့ကိုဤလိုင်းများအထက်ရုံငါစွန့်ခွာသောဗီဒီယိုကိုနှိပ်သောသူတို့ကိုသင်မည်သို့မြင်လိမ့်မည်, Meiigoo S8 ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မိနစ် 50 ကျော်ကြာသည်အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့က ဦး ဆောင်လမ်းပြနှင့်ဗီဒီယို၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုဖယ်ရှားလျှင် 55 မိနစ်ခန့်။ Youtube ကို၏အကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဒီဗီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည် Meiigoo S8 ကိုအလွန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်လိုအပ်သောဖြတ်တောက်မှုများနှင့်အမှန်တကယ်အချိန်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုကင်မရာနှင့်ကုသရန်အတွက်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကိုယူဆောင်လာသည်။ ငါဆိုသည်ကား ဤရှည်လျားသောဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၏အဓိပ္ပါယ်သည်သင် terminal ၏စစ်မှန်သောလည်ပတ်မှုကိုမြင်ခြင်းဖြစ်သည် သက်ဆိုင်သော terminal ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေသောမည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုသံသယဖြစ်စေရန်။
နောက်ဆောင်းပါးတွင် Meiigoo S8 နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များဇယား၏ပုံစံအတွက်သတင်းအချက်အလက် y ဗွီဒီယိုထဲမှာဆန်းစစ်ထားတဲ့ terminal ကအကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံး၏အနှစ်ချုပ်ဇယားများ.
မင်းအကြံဥာဏ်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိအောင်ငါငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ Terminal မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအရာအားလုံး လူတွေကများသောအားဖြင့်ဆောင်းပါးရဲ့အယ်ဒီတာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်၊ ဆိပ်ကမ်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်အခြားအရာများကိုသာကြည့်လေ့ရှိတဲ့အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစကားလုံးများဖြင့်ပို့စ်တစ်ခုမရေးဘဲနှင့်အချိန်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာမှမခေါ်သွားဘူး။
ဒီတော့သင် terminal ကိုငါထင်ထားတာထက်ပိုပြီးလေ့လာချင်ရင်၊ လျှောက်လွှာများနှင့်ဂိမ်းများကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်လိမ်လည်ခြင်းနှင့်ကတ်ထူပြားများမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည့်အရာအားလုံးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Meiigoo S8 လည်ပတ်နေသည်ကိုကြည့်ပါ။သို့ဖြစ်လျှင်ဒီဆောင်းပါး၏အစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့သည့် Meiigoo S8 ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုကြည့်ရှုရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ ထိုနေရာတွင်သင် terminal ကိုမြင်နေလျှင်သင်၌သံသယရှိနေလျှင်မည်သည့်သံသယကိုမဆိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ တစ်ခုဝယ်ယူ။
1 Meiigoo S8 နှင့် terminal ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကို unboxing လုပ်သည်
2 နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ Meiigoo S8
3 ဗွီဒီယိုစမ်းသပ်ကင်မရာများ Meiigoo S8
4 Meiigoo S8 ၏အကောင်းဆုံး
5 အဆိုးဆုံးကတော့ Meiigoo S8
7 Meiigoo S8 နိုင်ငံတကာမဲချခြင်း
Meiigoo S8 နှင့် terminal ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကို unboxing လုပ်သည်
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ Meiigoo S8
operating system Android 7.0 Nougat သည် Samsung Galaxy S8 ၏ interface ကိုတုပပြီးကိုယ်ပိုင် Launcher ကိုသာတပ်ဆင်ထားသည်။ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကျသည်။
ဖန်သားပြင် ၆.၁ လက်မအရွယ် 6.1D IPS Full HD + နည်းပညာဖြင့် resolution ၂၁၆၀ x ၁၀၈၀p ရှိသည်။ နှင့် 3.0 dpi - 2160H Asahi Glass High Strength Laminate Panel ကိုအသုံးပြုထားသည်
Processor ကို Mediatek 6750T Octa Core 1.5 Ghz
GPU ကို Mali T860 dual-core သည် 56 Hz ဖြစ်သည်
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64 Gb / 53.19 Gb သည်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဂိမ်းများနှင့်မာလ်တီမီဒီယာသိုလှောင်မှုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ Micro SD အထိ 256 Gb အထိထောက်ပံ့သည်
နောက်ကင်မရာ 214 + 0310 Mpx ၏ IMX13 + GC5 အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုစီသည် ၂.၂ focal aperture နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Autofocus full HD video recording
ရှေ့ကင်မရာ 190 mpx IMX5 အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူအလှတရားလှပမှုနှင့် 640 x 480 pixels ရှိဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်မှုများပါဝင်သည်
ဆက်သွယ်မှု dual SIM ကဒ် NANO ဆင်းမ်ကဒ်သို့မဟုတ် Nano SIM + MicroSD Band 2G: GSM: 850 (B5) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 1900 (B2) MHz 3G: WCDMA: 850 (B5) / 900 (B8) / 2100 ( B1) MHz 4G: FDD_LTE: B1 / 3/7/8/20 - Wifi 802.11a/b/ g / n - Bluetooth V2.0 + EDR V3.0 + HS V4.0 LE - GPS နှင့် aGPS GLONASS - OTG - OTA - FM ရေဒီယို
အခြားအင်္ဂါရပ်များ USB TypeC connector - မြန်နှုန်းမြင့်အားသွင်းစက်နှင့်ပါ ၀ င်သည်
ဘက်ထရီ မဖြုတ်နိုင်သော 3300 mAh
ရှုထောင့် 159.3 x ကို 75.8 x ကို 8.3mm
အလေးချိန် 188 ဂရမ်
စြေး 142.01 ယူရို Banggood ကမ်းလှမ်းမှု
ဗွီဒီယိုစမ်းသပ်ကင်မရာများ Meiigoo S8
တန်ဖိုးပိုများသည့်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းလုပ်သကဲ့သို့ဤတွင်ကျွန်ုပ်အားသင့်ကိုထားရှိပါသည် ဒီ Meiigoo S8 တွင်ထည့်သွင်းထားသောကင်မရာများကိုစမ်းသပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းပုံတစ်ပုံသည်စကားလုံးတစ်ထောင်တန်သည်။ ဤကိစ္စတွင် Meiigoo S8 ကင်မရာများနှင့်လုံး ၀ ရိုက်ကူးထားသောဗွီဒီယိုသည်ကျွန်ုပ်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားနိုင်သည့်အရာဖြစ်ပြီးကင်မရာနှစ်ခုလုံး၏စစ်မှန်သောလည်ပတ်မှုကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ ထိုအခါငါနှစ် ဦး စလုံးကင်မရာများမှပြောကြသည် Meiigoo S8 ရဲ့နောက်ဘက်ကင်မရာက ၅ မီတာ mpx ရှိတဲ့ဒုတိယကင်မရာကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက်အတုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။.
ဒါတောင်မှ terminal ကို, ငါ့နှိမ့်ချထင်မြင်ချက်အရ, စျေးကွက်အကွာအဝေးများအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောအကွာအဝေးအဘို့, တစ် ဦး terminal ကို အဲဒါဟာယူရို ၁၅၀ အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာသတိရပါ, ဒါဟာလျောက်ပတ်သောကင်မရာများထက်ပိုပါတယ်။
Meiigoo S8 ၏အကောင်းဆုံး
၆.၁ လက်မမျက်နှာပြင် FHD + မျက်နှာပြင်
အဆိုးဆုံးကတော့ Meiigoo S8
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ
Meiigoo S8 နိုင်ငံတကာမဲချခြင်း
ဒီထိပ်တန်းရန် အဆိုပါ Meiigoo S8 ၏ In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာငါတို့သည်သင်တို့ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ် ဒီဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသော terminal ကိုသင်အခမဲ့ယူနိုင်သည်ကျွန်ုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအလွန်ချစ်သော terminal တစ်ခုဖြစ်သောကျွန်ုပ်သည်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်၏မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းများကိုအကြံပေးလိုပါသည်။
သင်ပါ ၀ င်လိုလျှင် Meiigoo S8 လက်ဆောင်ပေးသည်, un လာမယ့်ကောင်းသောညအထိတက်ကြွလိမ့်မည်ဟုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ raffleဆိုလိုသည်မှာ၊ လာမည့်ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် ၂၀၁၇ မနက် ၁၁:၅၀ နာရီ၊ စပိန်အချိန် GMT + 24 အထိကျွန်ုပ်သည်သင့်အားဤလိုင်းများအထက်တွင်ထားခဲ့သည့်ဗီဒီယိုကိုမကြည့်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Samsung Galaxy S8 Plus ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်ပွားဖြစ်သော Meiigoo S8 ၏ဗွီဒီယိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်
downloadbestnow.com မှ ဟုသူကပြောသည်
၁.၅ Ghz ပရိုဆက်ဆာနဲ့နည်းနည်းတိုတယ်မဟုတ်လား။
Meiigoo M1 သည်ပိုမိုအစွမ်းထက်ပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သလား။
Chrome 64 သည် pop-ups များကိုပိတ်ဆို့ပြီး self-playing ဗီဒီယိုများကိုအသံတိတ်ထားမည်
M-HORSE စင်ကြယ်သော 1 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း